ईमेल सूची सफाई र स्वच्छता सेवाहरू: किन तपाईंलाई एक आवश्यक छ र कसरी छनौट गर्नुहोस् Martech Zone
बल्क इमेल ठेगाना सूची प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण, र सफाई
शुक्रबार, मार्च 5, 2021 सोमवार, मे 16, 2022 Douglas Karr
ईमेल मार्केटिंग रगत खेल हो। पछिल्ला २० बर्षमा, केवल ईमेलको साथ परिवर्तन गरिएको त्यो मात्र राम्रो हो ईमेल प्रेषकहरूले ईमेल सेवा प्रदायकहरू द्वारा अधिक र अधिक सजाय पाउन जारी राख्छन्। जबकि ISPs र ESPs समन्वय गर्न सक्दछ यदि उनीहरू चाहन्थे भने, तिनीहरू त्यसो गर्दैनन्। नतीजा यो छ कि त्यहाँ दुबै बीच एक वैमनस्य सम्बन्ध छ। इन्टर्नेट सेवा प्रदायक (ISPs) ब्लक ईमेल सेवा प्रदायक (ESPs)… र ESP हरू ग्राहकहरुलाई रोक्न बाध्य छन्।
यदि तपाईंको ईमेलको १०% भन्दा बढि खराब छ भने,% 10% भन्दा कम डेलिभर गरियो!
यो उद्योगमा डबल अप्ट-इन जत्तिकै सरल छैन। हाम्रो जस्तो साइटहरूले विक्रेताहरू र ग्राहकहरूको साथ साझेदारी अभियानमा साझेदारहरूसँग काम गर्दछ। हामी तिनीहरूलाई हाम्रो सूचीमा पहुँच दिदैनौं, तर धेरै चोटि हामी अभियानहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि ईमेल ठेगानाहरू भेला गर्दछौं। त्यो एक ठूलो टाउको भएको छ। ईमेल सेवा प्रदायकहरूले तपाईंको optin विधि र तपाईंको अडिट ट्रेलको ख्याल राख्दैनन्; तिनीहरूले केवल एउटा स्प्यामर हो भनेर मान्दछन्।
ESPs मनपर्छ MailChimp भनिने प्रणालीमा इमेल ठेगानाहरूमा खुफिया लागू गरेको छ ओम्निभोर। ओम्निभोरको साथ, मेलचिम्पले ,50,000०,००० चेतावनी पठायो र एक वर्षमा 45,905 accounts ० मालिसियस खाताहरू बन्द गर्‍यो। ती तथ्यहरूलाई प्रचार गर्न सक्छन् कि ती खाताहरू खराब थिए ... म तर्क गर्छु कि तिनीहरू मध्ये धेरै केवल कम्पनीहरू थिए जसले उनीहरूको सूचिको लागि पठाउँदै थिए र उत्तम अभ्यासहरू प्रयोग गरेनन्।
बृहस्पति अनुसन्धान अनुसार, २० प्रतिशत भन्दा बढी ईमेल रेजिष्ट्रेसनहरू typos, वाक्यविन्यास, डोमेन र अन्य त्रुटिहरू समावेश गर्दछ। पुरानो सूचीमा पठाउन जत्तिकै सजिलो केहि गरिंदै जहाँ ईमेल ठेगानाहरू बाउन्सको एक खास थ्रेसोल्डले उनीहरूको थ्रेसोल्ड सेट गर्न सक्दछ। त्यो द्वेषपूर्ण छैन। त्यहाँ बोटहरू उल्लेख नगरिकन स्प्याम जाल ईमेल ठेगानाहरू प्रत्येक दिन प्रणाली मार्फत धकेल्छन् र तपाईंलाई समात्छन्। विडंबना, मेरो रायमा यो हो कि मलाई विश्वास छ कि एक स्प्यामरको लागि तपाईको इनबक्समा ईमेल प्राप्त गर्न सजिलो छ औसत कम्पनी पठाउँदा औसत सन्देश भन्दा।
ईमेल सेवा प्रदायकहरु पनि उनीहरूको छुट्याउने दरको बारेमा इमानदार छैनन्। अक्सर, तिनीहरू टाउट % 99% डिलिभिलिटी रेटिंग, तर सानो प्रिन्टले भन्छ कि यो केहि ईमेल पठाईएको पछि छ। ठीक छ, डुह ... पहिले अवैध ईमेल ठेगानाहरू क्याप्चर पठाउँदछ! A को लागी औसत स्वीकृति दर प्रेषक स्कोर 91 १ वा ठूलोको% 88% छ। तपाइँको सूचीको १% खराब भएकोले तपाइँको वितरणयोग्यतालाई १०% भन्दा बढी घटाउन सक्छ!
धन्यबाद, त्यहाँ छन् ईमेल प्रमाणिकरण र सूची स्वच्छता प्रदायकहरू बजारमा कसले बुद्धिको जम्मा गर्छ र यस गडबडीमा फस्नु अघि तपाईंको सूचि सफा गर्न मद्दत गर्दछ। दिमागमा राख्नुहोस् कि त्यहाँ बिच ठूलो भिन्नता छ ईमेल प्रमाणीकरण बनाम ईमेल प्रमाणिकरण सेवाहरू। ईमेल प्रमाणीकरणले पुष्टि गर्छ कि इ-मेल ठेगाना ठीकसँग निर्माण गरिएको छ, जबकि ईमेल प्रमाणिकरणले डेलिभर हुने सम्भावनाको पूर्वानुमान गर्न विधिहरू प्रयोग गर्दछ।
तपाईंलाई ईमेल सूची सफा गर्नु किन आवश्यक छ?
ईमेल स्वच्छता एक उत्कृष्ट ईमेल डिलिभिलिटी प्रोग्राम राख्नु र राम्रो प्रेषक प्रतिष्ठा कायम गर्न आवश्यक चरण हो। यहाँ scen परिदृश्यहरू छन् जहाँ ईमेल सूची सफा गर्नु आवश्यक छ:
माइग्रेशन - यदि तपाईं नयाँ प्रदायकमा सर्दै हुनुहुन्छ भने, ईमेल सूची सफाई तपाईंको मा एक आवश्यक चरण हो आईपी ​​वार्मिंग रणनीति.
कम इनबक्स प्लेसमेन्ट - तपाईका इ-मेलहरू सिधा कबाडी फोल्डरमा जान सक्छन किनकि तपाईको सूचीमा यति धेरै स्पाम जालहरू छन् र यसमा ईमेल ठेगानाहरू बाउन्स गरियो।
कम खुला दरहरू - यदि तपाईं आफ्नो इनबक्स प्लेसमेन्ट दर मापन गर्नुहुन्न र कम खुला दरहरू छन् भने, तपाईंको ईमेलहरू धेरै स्पाम जाल र बाउन्स ईमेल ठेगानाहरूको कारण रद्दी फोल्डरमा जाँदै हुन सक्छ।
पुनः सगाई - यदि तपाईंसँग सूची छ जुन तपाईंले महिनौंमा पठाउनु भएको छैन भने, तपाईं सूची खाली गर्न चाहानुहुन्छ बाउन्समा स्पाइकबाट बच्न जुन तपाईंको उद्धार दरलाई असर गर्न सक्छ।
कसरी एक ईमेल सूची सफाई सेवा छनौट गर्ने
यो पृष्ठ अविश्वसनीय रूपमा लोकप्रिय भएको छ, त्यसकारण हामी यो सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं कि हामी एक प्रदायकको छनौट गर्न केहि मार्गनिर्देशन प्रदान गर्दछौं र हामी तल सूचीलाई किन सिफारिस गरिएको र अज्ञात ईमेल सूची स्वच्छता सेवाहरूमा विभाजित गर्दछौं। हाम्रो सिफारिशहरू निम्नमा आधारित थिए:
नियम - के सेवामा सर्तहरू छ र गोपनीयता नीति स्थानमा छ कि छैन पनी यो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाइँको ईमेल ठेगाना कुनै पनि तेस्रो पक्षमा पुन: बेच्न वा रिलीज गर्दैन?
पारदर्शिता - के तिनीहरूको डोमेन स्वामित्व, व्यवसाय स्थान, र सम्पर्क जानकारीको लागि सम्पर्क जानकारीको साथ खुला अनलाइन दर्ता गरिएको सेवा हो? के व्यापार एक समर्पित अफिस स्थान हो (र PO बक्स वा सेयर अफिस होईन)?
समर्थन - वा भएन भने कम्पनीले तिनीहरूलाई ईमेल, सम्पर्क फारम, वा फोन नम्बर मार्फत सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू भएको थियो र वास्तवमा कसैले अनुरोधमा प्रतिक्रिया जनायो।
एकीकरण - ईमेल ठेगानाहरूको बल्क प्रोसेसिंग एक चीज हो, तर यदि तपाईं आफ्ना सबै प्रणालीहरू र प्रविष्टि पोइन्टहरू एकीकृत गर्न सक्नुहुनेछ जहाँ तपाईं ईमेल ठेगानाहरू एकत्रित गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो निकै बढी कुशल प्रक्रिया हो।
एपीआई - के तिनीहरूसँग राम्रोसँग कागजात गरिएको एपीआई छ जहाँ तपाईं आफ्नो प्लेटफर्महरू तिनीहरूलाई सिधा समाहित गर्न सक्नुहुनेछ?
अनुपालन - हैन या GDPR वा ईमेल स्पाम अनुपालन कानून को रूप मा गोपनीयता नियमहरु संग कम्पनी एक देश मा बस्ने।
हाम्रो ईमेल सूची सफाई प्रायोजक:
ईमेल प्रमाणीकरण, विश्लेषण र सूची सफाई मानिसहरू को लागी डिजाइन गरीएको छ जो सबै गडबडी र upsells बिना द्रुत र भरपर्दो उपकरण चाहनुहुन्छ। केवल simple सरल चरणहरू तपाईंको सूची अनुकूलन गर्न।
ग्यारेन्टी 98%% + वितरण दर तपाईंको प्रमाणित ईमेल सूचीको साथ।
विकल्पहरू डाउनलोड गर्न तपाईंको नयाँ सूचि र विशेष रिपोर्टहरू।
24 /7वाहक अर्को छेउमा वास्तविक व्यक्तिको साथ मद्दत गर्न।
तपाईंको ईमेल सूची अपलोड गर्नुहोस्
प्रमुख ईमेल सूची सफाई र स्वच्छता प्रदायकहरू
यहाँ अग्रणी ईमेल प्रमाणीकरण र सूची स्वच्छता सेवाहरु छन्। यी सबैमा एक अनलाइन प्लेटफर्म समावेश छ जहाँ तपाईंलाई बिक्री टोलीलाई सम्पर्क गर्न आवश्यक पर्दैन र ती सबैको डाटा प्रयोगमा सर्तहरू छन्, पारदर्शी छन्, र समर्थन अनुरोधहरूको सक्रियतापूर्वक जवाफ:
यी सूची को उपयोगिता स्वच्छता सेवाहरु गर्न सक्छन् ईमेलको प्रतिशत सुधार गर्नुहोस् त्यो इनबक्समा, तपाईंको ब्लक हुने जोखिम कम गर्नुहोस् इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु द्वारा, र निकालिएको जोखिम कम गर्नुहोस् तपाईंको ईमेल सेवा प्रदायक द्वारा ... तिनीहरू लगानीको लायक छन् यदि तपाईंसँग पुरानो सूची छ वा एकमा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने। दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाई केवल आफ्नो सूचीमा १००% शुद्धतामा कहिले पुग्न सक्नुहुन्न। व्यक्तिहरूले रोजगार र प्रदायकहरू प्राय परिवर्तन गर्दछन्, आफ्ना पुरानो ईमेल ठेगानाहरूलाई छोडेर।
यी प्रदायकहरू मध्ये धेरैले पनि एक प्रस्ताव एपीआई ताकि तपाईं यसलाई आफ्नो अधिग्रहण प्रक्रियामा एकीकृत गर्न सक्नुहुनेछ।
एरोलेड्स - व्यावसाय ईमेल र संभावनाको फोन नम्बरहरू फेला पार्नुहोस्। तिनीहरूसँग एक क्रोम विस्तार पनि छ।
बाउन्सर - भरपर्दो इमेल परीक्षकको साथ आफ्नो इमेल सूचीहरू सफा गर्नुहोस्। प्रयोगकर्ता-अनुकूल इमेल प्रमाणिकरण र सूची सफा गर्ने उपकरणले तपाईंलाई सञ्चार कायम राख्न र वास्तविक व्यक्तिमा सहज र शीघ्रताका साथ पुग्न मद्दत गर्दछ।
ब्राइट प्रमाणित गर्नुहोस् - (अब वैधताको अंश) उपकरणहरूले तपाईंलाई तपाईंको ग्राहक डाटाबेस, ईमेल मार्केटिंग अभियानहरू, वा अनलाईन न्यूजलेटर्सबाट अवैध ईमेलहरू हटाउन आवश्यक छ र तिनीहरूलाई राम्रोको लागि बाहिर राख्नु पर्छ। तपाईं सजिलैसँग फाईल ड्र्याग र ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ, क्लाउड मार्फत फाईल साझेदारी गर्नुहोस्, र कम्पनीलाई सम्पर्क नगरीकन तपाईंको सूचीमा विस्तृत रिपोर्टिंग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरू पनि एक छ एपीआई यदि तपाईं उनीहरूको साथ तपाईंको ईमेल प्रमाणीकरण एकीकृत गर्न चाहनुहुन्छ भने!
क्लियरआउट - यो बल्क ईमेल सत्यापनकर्ताले तपाईंलाई ईमेल डाटाबेस अपलोड गर्न र एकल क्लिकको साथ तपाईंको ईमेल सूची खाली गर्न सक्षम गर्दछ।
डिबाउन्स - डिबाउन्स सेवाले तपाईंलाई ईमेल ठेगानाहरूको सूची छिटो र सुरक्षित तरिकाले अपलोड गर्न र प्रमाणिकरण गर्न अनुमति दिन्छ।
ईमेल परीक्षक - तपाइँको लागि नक्कली वा अवैध ईमेल ठेगानाहरू पहिचान गर्दछ।
ईमेल परीक्षक - (माथिका भन्दा फरक) ईमेल परीक्षक ईमेल प्रमाणीकरण क्षेत्र भित्र मूल अग्रगामीहरू मध्ये एक हो जसले ईमेल संचारको वितरण योग्यतामा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
विशेषज्ञ डेटा गुणस्तर - एक ईमेल प्रमाणीकरण समाधान हो कि तत्काल पहिचान गर्दछ कि एक ईमेल ठेगाना मान्य र वितरण योग्य छ कि छैन।
फ्रेश एड्रेस इ-मेलमा निर्भर कम्पनीहरूलाई मद्दत पुर्‍याउने कम्पनीहरूले निर्माण, अद्यावधिक, सेगमेन्टि and र उनीहरूको ईमेल सूचीहरू सफा गरेर राजस्व चलाउन।
इम्प्रेशनवाईज's डेटा खुफिया प्लेटफर्म नीति आधारित चालु नियम सेट र वास्तविक-समय स्क्यानिंग एल्गोरिदममा आधारित छ जुन बहु-स्तरित दृष्टिकोण प्रयोग गर्दछ, पहिचान गर्न, वैध बनाउन, र ईमेलमा आधारित खतराहरूको एक विस्तृत श्रृंखला विरूद्ध सुरक्षाको लागि।
कम्प्युटर - चाँडै र सहजताका साथ ईमेल ठेगानाहरू र डोमेनहरूलाई प्रमाणीकरण गर्नुहोस् र प्रमाणीकरण गर्नुहोस् तिनीहरूको शुद्धता सुनिश्चित गर्न तपाईंले अनावश्यक समय, उर्जा र पैसा खर्च गर्नु अघि, तपाईंको सन्देश delive ०% ले वृद्धि गर्नुहुन्छ।
किकबक्स - किकबक्सले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईं मात्र वास्तविक प्रयोगकर्ताहरूलाई ईमेल पठाउनुहुन्छ र तपाईंलाई कम-गुणवत्ता ठेगानाहरू उच्च-मूल्य सम्पर्कहरूबाट अलग गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईंको प्रतिष्ठा सुरक्षित गर्नुहोस्, खुला दरहरू बढाउनुहोस्, र किकबक्सको साथ पैसा बचत गर्नुहोस्।
मेलर चेक - ईमेल प्रमाणीकरण, विश्लेषण, र सूची सफाई मानिसहरू को लागी डिजाइन गरीएको छ जो सबै गडबडी र upsells बिना द्रुत र भरपर्दो उपकरण चाहनुहुन्छ। केवल simple सरल चरणहरू तपाईंको सूची अनुकूलन गर्न।
मिलियन भेरिफायर - ग्यारेन्टी गरिएको उच्च सटीकता र किफायती दरहरूको साथ ईमेल प्रमाणिकरण।
नेभनबाउन्स अवैध ईमेल ठेगानाहरू हटाउँछ र नाटकीय रूपमा अन्तिम वितरणको लागि समग्र बाउन्स दरहरू कम गर्दछ।
प्रूफ - चाँडै मान्य गर्नुहोस् र तपाईंको ईमेल सूची प्रमाणित गर्नुहोस्। EU-US गोपनीयता शिल्ड अनुरूप।
द चेकर -'s०+ देशका १,००० पेशेवरहरू हाम्रो बल्क ईमेल प्रमाणीकरण र ईमेल सूची सफाई सेवाहरूमा भर पर्दछन्।
टावरडाटा - तपाईंको ईनबक्स वितरण दर बढाउनुहोस् तपाईंको ईमेल सूची अवैध र धोखाधडी ईमेल ठेगाना सफा गरेर।
प्रमाणित गर्नुहोस् - जान्नुहोस् तपाइँ एक खाता ईमेल गर्दै हुनुहुन्छ जुन बाउन्स हुँदैन। Xverify वास्तविक समय र ब्याच मार्फत ईमेल ठेगानाहरू प्रमाणित गर्न सक्दछ।
वेबबुला - ईमेल स्वच्छता र डाटा वृद्धि सेवाहरू।
अन्य ईमेल प्रमाणीकरण सेवाहरू अनलाइन
यहाँ अन्य ईमेल प्रमाणीकरण र स्वच्छता सेवाहरू छन् विश्वस्त संकेतकहरू सबै थिएनन् माथीका कम्पनीहरूको।
एम्प्लीज - एम्प्लीजले तपाईको ग्राहक ईमेल ठेगानाहरूलाई वास्तविक समयमा प्रमाणित गर्दछ र तपाईलाई ईमेल हाईजीन राख्न अधिकतम प्रतिक्रिया दर दिई मद्दत गर्दछ। यस डोमेनमा पंजीकृत पनि छ बाउन्सलेस सेवा बाउन्सलेसले तपाईंको ईमेल सूचीहरू सफा गर्नेछन् असत्यापित ईमेलहरू, स्पाम जालहरू, र डिस्पोजेबल डोमेनहरू पत्ता लगाएर।
एन्टिडियो - ईमेल प्रमाणीकरण एपीआई सेवा डिस्पोजेबल / अस्थायी ईमेल ठेगानाहरू, स्पाम ईमेल, आदि, बाहिर सूचीबद्ध गर्न तपाईंको सूचि सफा राख्न।
ब्लक डिस्पोजेबल ईमेल ठेगानाहरू - पत्ता लगाउनुहोस् र ब्लक डिस्पोजेबल, एक पटक, थ्रोअवे, अस्थायी ईमेल ठेगानाहरू।
थोक ईमेल प्रमाणीकरणकर्ता - एक वेब अनुप्रयोग जसले प्रमाणित गर्न सक्दछ यदि ईमेल ठेगाना वास्तविक वा नकली हो। जो कोही नियमित रूपमा ईमेल पठाउँछ उसले प्रणाली प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्दछ।
कप्तानवेरिफाई - जाँच गर्नुहोस् र तपाईंको मेलिंग सूची छिटो सफा गर्नुहोस्। हाम्रो उपकरणमा तपाईंको फाईल ड्र्याग र ड्रप गर्नुहोस् र हामी बाँकी गर्छौं। सरल, छिटो र सुरक्षित।
ClearTheList.com - सफाई र ईमेलको प्रमाणीकरण।
सम्पर्कआउट - कसैको व्यक्तिगत ईमेल ठेगाना साथ साथै फोन नम्बर फेला पार्नुहोस्
डाटाविलिडेसन - तपाईंको ईमेल सूची छिटो प्रमाणित गर्नुहोस्। मेलचिम्प वा लिङ्क गर्नुहोस् निरन्तर सम्पर्क निरन्तर अनुगमन र सूची मर्मतका लागि खाता।
ईमेलमार्कर - ईमेलमार्करले तपाईंलाई उच्च-मूल्य सम्पर्कहरूबाट कम-गुणवत्ता ईमेल फिल्टर गर्न मद्दत गर्दछ। हामी निश्चित गर्दछौं कि तपाईं मात्र वास्तविक प्रयोगकर्ताहरूलाई ईमेल पठाउनुहोस् र तपाईंको प्रतिष्ठा जोगाउनुहोस्, तपाईंको ईमेल अभियान बढाउनुहोस्, र ईमेलमार्करमार्फत पैसा बचत गर्नुहोस्।
eHygienics एक पेशेवर ईमेल प्रमाणीकरण कम्पनी हो। तिनीहरूले उपभोक्ता डाटाबेसबाट बाउन्स, धम्की, प्रदर्शनकारीहरू, अभियुक्तहरू, र अन्य सबै सम्भाव्य जोखिमहरू हटाउँछन्। eHygienics वास्तविक समय प्रदान गर्दछ एपीआई प्लेटफार्महरु जुन दुनिया भर मा सदस्यहरु द्वारा दैनिक प्रयोग गरीन्छ।
ईमेल उत्तरहरू - सुरक्षित ईमेल सूची सफाई र प्रमाणीकरण सेवा जसले तपाईंको हालको ईमेल ठेगाना डाटाबेसलाई स्क्रब, सफा, मान्यकरण, र प्रमाणित गर्दछ।
ईमेलहिपो - व्यावसायिक प्रमाणीकरणकर्ताहरू र तिनीहरूका ग्राहकहरूको लागि ईमेल मान्यीकरण अनलाइन सेवा
ईमेलइन्स्पेक्टर - सफा गर्नुहोस् र तपाईंको मार्केटिंग सूचीबाट अवैध ईमेल ठेगानाहरू हटाउनुहोस्
ईमेल सूची प्रमाणित गर्नुहोस् - प्रमाणित इ-मेल सूचीले तपाईंलाई मार्केटमा सबै भन्दा विस्तृत ईमेल प्रमाणीकरण समाधान प्रस्ताव गरेर दण्डबाट जोगाउँदछ, तपाईंको ईमेल सूची बाउन्स-फ्री, वैध, र उच्च आरओआई डेलिभर गर्दैछ भन्ने कुरा निश्चित गरेर।
ईमेल योयो - पेशेवर ईमेल मान्यकरण सूची सफाई समाधान।
ईमेल मान्यकर्ता - बाइटप्लान्ट रियल-टाइम अनलाइन ईमेल मान्यकर्ताको साथ तपाईं सजिलैसँग प्रमाणित गर्न सक्नुहुनेछ कि यदि एक ईमेल ठेगाना अवस्थित छ र मान्य छ।
क्लेमेल - Klemail ले तपाइँले पठाउनु भएको ईमेलहरू अवस्थित छ भनेर जाँच गर्न अनुमति दिँदछ। तपाईंको डोमेन प्रतिष्ठालाई बचाउनुहोस् र तपाईंको खुला दर बढाउनुहोस्।
सूचि - हामीले सयौं लाखौं इ-मेल ठेगानाहरूको नतीजा विश्लेषण गरेका छौं जुन नयाँ ईमेल सूची-सफाई इञ्जिन डिजाइन गर्न सफा गरिएको छ जुन कहिलै अझ शक्तिशाली छ। लिस्टवाईज २ नि: शुल्क प्रयोग गरी हेर्नुहोस् र तपाईंको ईमेल मार्केटिंग प्रदर्शनलाई नयाँ उचाइमा लैजानुहोस्
मेलबक्सभालिडेटर - मेल सर्भरमा जडान गर्दछ र मेलबक्स अवस्थित छ कि छैन भनेर जाँच गर्दछ
मेल चेक - सामाजिक नेटवर्कहरू प्रयोग गरेर ईमेलहरू र फोनहरूलाई मान्य गर्दछ
मास्टर्सफ्ट समूह - अस्ट्रेलियाको डाटामा केन्द्रित
द्रुत ईमेल प्रमाणीकरण - एक वेब आधारित सेवा थोक वा वास्तविक समयमा एक REST एपीआई प्रयोग गरी ईमेल ठेगानाहरू प्रमाणित गर्न। तिनीहरूले अवैध र गैर-कामका ईमेलहरू पत्ता लगाउँदछन् र तपाईंलाई पूर्ण विस्तृत रिपोर्ट प्रदान गर्दछ।
SiftLogic - इनबक्स प्लेसमेन्ट र प्रेषक प्रतिष्ठा अधिकतम गर्न मद्दतको लागि ईमेल प्रमाणिकरण र स्कोरिंग।
स्नोभियो - कोल्ड आउटरीच ऑटोमेशन - राम्रो रूपान्तरण दरहरूको लागि स्नोभियोको साथ फेला पार्नुहोस्, मान्य गर्नुहोस्, र ईमेल संभावनाहरू।
ट्रुमेल - ईमेल प्रमाणिकरण। सजिलो, छिटो र सस्तो। तपाईंको मेलिंग सूची सफा गर्नुहोस् र तपाईंको उद्धार दर बढाउनुहोस् 99 XNUMX% सम्ममा। ईमेल ठेगाना प्रमाणीकरण प्रक्रिया यति सजिलो कहिल्यै थिएन।
भेरिफालिया - भेरिफिया एक वेब-आधारित ईमेल मान्यीकरण सेवा हो जसले तपाईंलाई अपलोड गर्न र ईमेल ठेगानाहरूको सूची मान्य गर्न सजिलो र सजीलो गर्न दिन्छ।
प्रकटीकरण: हामी यी मध्ये कुनै एक प्रदायकको चयनमा तपाईंको सफलताको लागि कुनै जिम्मेवारी लिदैनौं, हामी केवल केही थप विश्वास प्रमाणिकरणहरूको साथ विस्तृत सूची प्रदान गर्न चाहन्छौं। हामी यस लेख भित्र सम्बद्ध लिंकहरू प्रयोग गर्दैछौं।
टैग: ऐन अनसक्रिय अभियानसक्रीयएरोलेड्सफुर्ती-सीआरएमAiva- प्रयोगशालाहरुएम्प्लीजautopilotAWeberबम बमउछालबाउन्सलेसब्राइट प्रमाणित गर्नुहोस्ब्रोंटोअभियान निगरानीकप्तानभेरिभईचेकमार्केटसफा सूचीसूची सफा गर्नुहोस्चतुरक्लिक गर्नुहोस्फनलहरूकोग्निटो-फार्महरूनिरन्तर सम्पर्कसम्पर्कपूर्वकरूपान्तरण गर्नुहोस्सिर्जना गरिएकाडाटा प्रमाणीकरणडाटाविलिडेसनDEAछुटकाराडिस्पोजेबल ईमेल ठेगानाडिस्पोजेबल ईमेल ठेगाना पहिचानड्रिपeHygienicsइ - मेल ठेगानाईमेल ठेगाना स्वच्छताईमेल उत्तरहरूईमेल परीक्षकईमेल सफाई एपीआईईमेल वितरणयोग्यताईमेल हिप्पोईमेल स्वच्छताईमेल सूची प्रमाणित गर्नुहोस्ईमेल प्रमाणीकरणईमेल मान्यकर्ताईमेल प्रमाणिकरणईमेल प्रमाणिकरण एपीआईईमेल योयोईमेलहिप्पोespविज्ञफार्मडेस्कफोर्मसाइटफ्रेश एड्रेसफुलक्रमGDPRगेटसाइट नियन्त्रणगुगल फारामहरूHighriseहबस्पटहुबुकोIContactIcontact- प्रोछाप अनुसारइनबक्स प्लेसमेन्टअन्तर्वार्ताInstapageintercomispJotFormरद्दी ईमेलजंक ईमेल फिल्टरिंगकिकबक्सKickofflabsक्लेमेलसूची सफाईसूची सफा गर्नुहोस्सूची स्वच्छतामेल चेकरmailchimpमेलरलाईटमेलजेटमेलअपमार्केटोमुजन्डNocrmioकागजपत्रपावरप्रुफिकसबूत .ioQasQualarooद्रुत ईमेल प्रमाणिकरणक्विकटापसर्वेरेफरल-रकRFC 1035RFC 1123RFC 2822RFC 5321आरएफसी 5322 2821२२ आरएफसी २XNUMX२१RFC 6531बिक्री बल pardotप्रेषक प्रतिष्ठाSendGridSendpulseसेंडेक्सशार्पस्प्रिंगस्मार्टमेलिंगस्मार्टसर्वेस्मुभस्पामस्पाम जालस्पाम जाल ईमेल ठेगानाहरूस्पार्कपोस्टस्ट्राइकिरनसर्वेक्षण-एनिप्लेसअस्थायी ईमेल ठेगानाहरूजाँचकर्ताटावरडाटाट्रुमेलटाइपफर्मअनबाउन्ड गर्नुहोस्ईमेल सूची मान्य गर्नुहोस्प्रमाणइमेल पुष्टी गरठाडो प्रतिक्रियाठाडो अनुत्तरदायीvision6Wooboxवुफुप्रमाणित गर्नुहोस्zapperजेन्डेस्कZoho CRMजोहो फारामहरू
एसईओ मिथक: के तपाईंले कहिल्यै उच्च श्रेणीमा रहेको पृष्ठ अपडेट गर्नुपर्दछ?
अप्रिल 25, 2014 मा 10: 49 एएम
महान सिंहावलोकन, डग। तथापि, यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ
इमेल डेलिभरिबिलिटी समस्याहरू बेवास्ता र जित्नको लागि व्यापक आवश्यकता छ
इमेल स्वच्छता, सुधार, र प्रमाणीकरण सेवा केवल "पिंगिङ" को विपरित।
(जस्तै SMTP जाँचहरू) जुन तपाईंको सूचीमा भएका अधिकांश विक्रेताहरूले प्रदान गर्छन्। SMTP जाँचले मात्र जानकारी प्रदान गर्दछ
एक इमेल ठेगाना समय मा एक बिन्दु मा डेलिभर योग्य छ र को शुद्धता
यी नतिजाहरूले अझै पनि धेरै ISPs ले जे गर्न सक्छ त्यही गर्न छोड्छ
यो अभ्यास निरुत्साहित गर्न। यसबाहेक, बाउन्सहरू इमेलको प्रकोप होइनन्
मार्केटरहरू लगभग सबै कम्पनीहरूले अनुमति दिएको बाउन्स थ्रेसहोल्ड भन्दा तल आउँछन्
सबैभन्दा ठूला समस्याहरू सामना गरिरहेका छन्
इमेल मार्केटरहरूले समस्याग्रस्त इमेल ठेगानाहरू (जस्तै स्प्याम जाल, हनीपोट्स,
भारी स्प्याम उजुरीकर्ताहरू, मालिसियस ठेगानाहरू, आदि) तिनीहरूका फाइलहरूमा साथै अनजानमा
यी डेलिभरयोग्य ठेगानाहरूको रूपमा स्वच्छता त्रुटिहरू स्प्यामहाउस र
अन्य स्प्याम-फिल्टर गर्ने संस्थाहरूले स्प्यामरहरू फेर्रेट गर्न प्रयोग गर्दछ र छिटो र
को रडारबाट टाढा रहन
स्प्याम-फिल्टर गर्ने संस्थाहरू र यसैले तपाईंको डेलिभरिबिलिटीलाई अनुकूलन गर्नुहोस् र
राजस्व, एक इमेल स्वच्छता, सुधार, र प्रमाणीकरण संग काम गर्न आवश्यक छ
गर्न सक्ने प्रदायक:
1) ब्लक समस्याग्रस्त
ठेगानाहरू तपाईंको डाटाबेसमा प्रवेश गर्न र भएकाहरूलाई सफा गर्नुहोस्
पहिले नै त्यहाँ पुग्यो
2) सही टाइपिंग र
अन्य स्वच्छता त्रुटिहरू जस्तै स्प्यामहाउसले प्रायः बनाइएका धेरै टाइपहरू बदलेको छ
3) प्रमाणित गर्नुहोस्
इमेल-विशिष्ट विरुद्ध जाँच गरेर प्रत्येक इमेल ठेगानाको वितरण योग्यता
गतिविधि (जस्तै खुल्छ, क्लिक, बाउन्स, स्प्याम उजुरी, आदि), एक ऐतिहासिक
MX र SMTP जाँचहरूको अभिलेख, र वास्तविक-समय SMTP जाँचहरू।
माथिको सेवाको लागि लागत
प्रति इमेल ठेगाना एक पैसाबाट सुरु हुन्छ र भोल्युमको साथ महत्त्वपूर्ण रूपमा घट्छ
बढ्छ। यसबाहेक, कुनै पनि बेवास्ता गर्नुहोस्
सेवा प्रदायक जसको सेवा वास्तविक समय, स्वचालित ब्याचमा उपलब्ध छैन
(जस्तै 24x7x365), र पूर्ण सेवा ब्याच मोड, जसमा म्यानुअल समावेश छ
यदि तपाइँ सुनिश्चित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ
तपाईको इमेल मार्केटिङ प्रयासहरूले न्यूनतमको साथ उत्तम सम्भव ROI प्राप्त गर्दछ
लागत, झन्झट, र जोखिमहरू, इमेल स्वच्छता कम्पनीसँग साझेदारीले प्रमाणित गर्नेछ
तपाईंले कहिल्यै बनाउन सक्ने सबैभन्दा राम्रो सानो लगानी हुन।
थप विवरणहरूको लागि कसरी 25%
Fortune 100 कम्पनीहरू साथै हजारौं ठूला र साना मार्केटरहरू छन्
तिनीहरूको इमेल डाटाबेसहरू ताजा र अप-टु-डेट राख्दै, हेर्नुहोस् http://www.freshaddress.com/services/email-validation/
अक्टोबर 8, 2014 बिहान 2:32 बजे
नमस्ते डग र बिल्कप्लान,
तपाईं पनि हेर्न सक्नुहुन्छ http://www.mailboxvalidator.com इमेल सूची सफाई सेवाको लागि।
मार्क्स 20, 2015 मा 11: 55 PM
Webbula.com चेक आउट गर्न अर्को कम्पनी हो। तिनीहरूले स्वच्छता र प्रमाणीकरण प्रदान गर्छन्
मार्क्स 22, 2015 मा 3: 35 PM
थपियो, Scotty धन्यवाद!
अप्रिल 23, 2015 मा 4: 46 PM
सुझावहरूको लागि धन्यवाद, यदि कोही आफ्नो मार्केटिङ इमेल डाटाबेस किन्न वा सफा गर्ने बारे थप जान्न चाहन्छ भने, यो गाइड हेर्नुहोस्: http://bit.ly/1Ka27Hh
तपाईंले प्रयास गर्नुभयो http://www.bulkemailchecker.com ? मैले तपाईंको सूचीबाट केही सेवाहरू प्रयास गरें र नतिजा वा मूल्यसँग सन्तुष्ट भए पछि, मैले मेरो खोज जारी राखें र बल्क इमेल परीक्षक फेला पारे। म इमानदारीपूर्वक भन्न सक्छु कि उच्च गुणस्तरको कम मूल्य इमेल प्रमाणीकरण सेवाको लागि मेरो खोज सकियो। म तिनीहरूलाई विगत4महिनादेखि प्रयोग गर्दैछु र खुसी हुन सक्दिन। तिनीहरूलाई जाँच गर्नुहोस् र आशा छ कि तपाईंले आफ्नो खोज पनि रोक्न सक्नुहुन्छ!
धन्यवाद डग, एक राम्रो सप्ताहन्त छ!
यो सूचीमा छ!
सेप्टेम्बर 23, 2015 बेलुका 3:34 बजे
म हाल मेरो सूची प्रमाणित गर्नको लागि कम्पनी खोज्ने प्रक्रियामा छु र तपाइँ किन अन्य प्रदायकहरूसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो भनेर जान्न चाहानुहुन्छ? म यसमा नयाँ छु र धेरै वेबसाइटहरू मार्फत जाँदैछु कि तिनीहरूलाई के फरक बनाउँछ भनेर निर्धारण गर्न यो भारी छ। त्यसोभए यदि तपाइँ सम्भवतः साझा गर्न सक्नुहुन्छ किन तपाइँ अरूसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो र तपाइँ किन अन्य सबै साइटहरूमा बल्क इमेल परीक्षक छनौट गर्दै हुनुहुन्छ। यसले मलाई र सायद यो पढ्ने अरू धेरैलाई मद्दत गर्नेछ। म देख्छु कि मूल्यहरू बल्क इमेल परीक्षकमा धेरै राम्रो छन् तर म अन्य चीजहरू पनि जान्न चाहन्छु जसले तिनीहरूलाई अझ राम्रो बनाउन सक्छ। प्रतिक्रियाको लागि अग्रिम धन्यवाद।
सेप्टेम्बर 24, 2015 बेलुका 4:17 बजे
नमस्ते सिमोन, पुरानो सूचीहरू वा खरिद सूचीहरू प्रयोग गर्दा पहिले नै जोखिमहरू छन्। इमेल सेवा प्रदायकहरू, धेरै जसो भागको लागि, कुनै पनि कम्पनीलाई इमेल ठेगानाहरू आयात गर्ने घृणा गर्छन् जुन जाँच गरिएको छैन। र इमेल स्वीकार गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तपाइँको सबै इमेललाई पूर्ण रूपमा डाइभर्ट गर्नेछन् वा तपाइँको प्रदायकलाई ब्लक गर्नेछन् यदि ती धेरै इमेल ठेगानाहरू उछाल्छन् वा स्प्यामको रूपमा इमेल रिपोर्ट गर्नुहोस्। नतिजाको रूपमा, सान्दर्भिक इमेल ठेगानाहरूको इमेल ठेगानाहरूमा रोलिङ गर्दा सूची प्रमाणिकरण उपकरण प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाइँ गलत उपकरण प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ आफैलाई ISP द्वारा अवरुद्ध र तिनीहरूको इमेल सेवा प्रदायकबाट बाहिर निकालिने जोखिममा हुनुहुन्छ।
सेप्टेम्बर 1, 2015 बेलुका 11:27 बजे
सूची को लागी धन्यवाद !! मलाई केहि सोध्नु छ। म मेरो आफ्नै इमेल सफाई सेवा सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईं किन्नको लागि कुनै राम्रो सफ्टवेयर सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिलेसम्म कुनै भाग्य बिना हेरेको छु। म यसलाई सकेसम्म स्वचालित गर्न चाहन्छु। धन्यवाद
सेप्टेम्बर 2, 2015 मा 10: 40 AM
नमस्ते जोश, मलाई कुनै अफ-ह्यान्ड थाहा छैन, तर यहाँ सूचीबद्ध सेवाहरू मध्ये एकसँग एपीआई छ वा व्हाइट लेबल समाधान प्रस्ताव गर्दछ। यसले तपाइँलाई तपाइँको आफ्नै रूपमा समाधान ब्रान्ड गर्न अनुमति दिन्छ।
सेप्टेम्बर 16, 2015 मा 3: 26 AM
डाटाबेस मेल ठेगाना जाँच गर्न सरल तरिका, सबैभन्दा उन्नत इमेल परीक्षक। Proofy.io।
हामी अहिले बिटा परीक्षणमा छौं तर हामीसँग परीक्षण गर्ने सबैभन्दा सही तरिका छ।
हामीलाई प्रतिक्रिया चाहिन्छ। तपाईंले सेवा परीक्षण गर्न केही रकम उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ।
सेप्टेम्बर 17, 2015 बेलुका 1:20 बजे
तपाईं बिटाबाट बाहिर हुँदा हामीलाई थाहा दिनुहोस् र हामी तपाईंलाई प्रदायकहरूको सूचीमा थप्नेछौं!
म भर्खरै तपाईंको सेवाहरू परीक्षण गर्न तपाईंको साइटमा गएको थिएँ - त्यहाँ कुनै फोन नम्बर छैन। यो अत्यन्तै असम्भव छ कि कसैले पनि खाता प्रबन्धक वा कसैसँग आधार नछोइकन तपाईंको साइटमा सदस्यहरूको सूची अपलोड गर्नेछ कि मैले मेरो सदस्यहरूलाई अज्ञात स्रोतमा मात्र दिइरहेको छैन।
यदि तपाईंले Neverbounce द्वारा संचालित मा क्लिक गर्नुभयो भने, तपाईंले उनीहरूको नेभिगेसन पट्टीमा उनीहरूको फोन नम्बर देख्नुहुनेछ।
हे डगलस। म अलि अचम्ममा छु कि तपाईंले आफ्नो सूचीमा Verifalia उल्लेख गर्नुभएन। यो युरोपमा सबैभन्दा ठूलो इमेल प्रमाणीकरण प्रदायकहरू मध्ये एक मात्र देखिन्छ तर तिनीहरूले ल्याटिन वर्णमाला प्रयोग नगर्ने इमेल ठेगानाहरूको लागि समर्थन सहित मैले अरू कतै नदेखेको अद्वितीय सुविधाहरू पनि प्रदान गर्दछ (हामीसँग हाम्रो सूचीमा धेरै ग्राहकहरू छन्। उदाहरणका लागि, सिंगापुर, जापान र साउदी अरेबिया), र कोटा वा ग्रेलिस्टिङमा मेलबक्स जस्ता अस्थायी समस्याहरूसँग इमेल ठेगानाहरू मान्य गर्न धेरै पासहरू फैलिएको गहन प्रमाणीकरण गर्ने क्षमता। यस प्रदायकले सफ्टवेयर विकासकर्ताहरू र प्रमुख प्रोग्रामिङ भाषाहरू र प्लेटफर्महरूका लागि पुस्तकालयहरूका लागि एक RESTful इमेल प्रमाणीकरण API पनि खुलासा गर्दछ... र तिनीहरूसँग नि: शुल्क योजना पनि छ जुन प्रति दिन 125 सम्म निःशुल्क इमेल प्रमाणीकरणहरू आउँछ।
धन्यवाद – हामीले Verifalia लाई सूचीमा थपेका छौं!
र यो पोस्ट को लागी धन्यवाद 🙂
मार्क्स 15, 2016 मा 4: 43 PM
मैले इमेल सूची प्रमाणिकरण सेवा छनोट गर्न यस ब्लगमा केही सिफारिसहरू प्रयोग गरें। मैले emaillistverify.com को साथ समाप्त गरें, र जब म तिनीहरूसँग मेरो पहिलो सूचीमा खुसी थिएँ, मैले तिनीहरूको सेवामा चलाउने प्रयास गरेको प्रत्येक पछिको सूची समस्याग्रस्त भएको छ, प्राय जसो म सफाको सूची डाउनलोड गर्न सक्दिन। पछि इमेलहरू। यदि मैले कुन इमेल ठेगानाहरू मान्य छन् भनेर पत्ता लगाउन सक्दिन भने तिनीहरूको सेवा प्रयोग गर्नुको अर्थ के हो? यस बाहेक, तिनीहरूको समर्थन धेरै उत्तरदायी छैन र तिनीहरू ग्राहकहरूलाई कायम राख्नमा व्यस्त छैनन्।
मार्क्स 15, 2016 मा 5: 55 PM
हामीले Neverbounce सँग ठूलो भाग्य पाएका छौं... यति धेरै कि हामीले तिनीहरूसँग साझेदारी गरेका छौं।
अप्रिल 23, 2016 मा 7: 41 एएम
म नि:शुल्क सेवा वा सफ्टवेयर चाहन्छु । के यो कहिल्यै अवस्थित छ?!
अप्रिल 23, 2016 मा 8: 44 PM
मैले कुनै देखेको छैन।
अप्रिल 25, 2016 मा 7: 34 एएम
महान पोस्ट! म सोचिरहेको थिएँ कि यदि म GetResponse सँग त्यस्तो सेवा एकीकृत गर्न सक्छु?
अप्रिल 25, 2016 मा 7: 01 PM
एन्ड्रिया, म विश्वास गर्छु। मलाई लाग्छ कि यो गर्ने तरिका भनेको प्रमाणिकरण कम्पनीको API सँग तपाईको फारम काम गर्नु हो। एकचोटि इमेल प्रमाणित रूपमा फिर्ता भयो, त्यसपछि तपाइँ यसलाई GetResponse मा पुश गर्न सक्नुहुन्छ।
जुलाई,, २०१ at 9::2016। बिहान
म हाल प्रयोग गर्दैछु https://www.emailverifierapi.com/ भाग्य 500 कम्पनीको इमेल मार्केटिङ अनुप्रयोगमा इमेल ठेगानाहरू प्रमाणित गर्न। मलाई कुनै गुनासो छैन किनकि सेवाको गुणस्तर उत्तम छ, यद्यपि हामी समान गुणस्तर प्रदान गर्ने कम लागतको विकल्प खोजिरहेका छौं। के तपाइँ प्रयोग गर्न सकिने वैकल्पिक इन्टरप्राइज ग्रेड एपीआई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ? "इन्टरप्राइज ग्रेड" कुञ्जी शब्द हो। तपाईंको मद्दतको लागि धन्यवाद!
मलाई आशा छ, तपाईले राम्रो गरिरहनुभएको छ, तपाईलाई अपडेट गर्नको लागि, हामी हाम्रो इमेल प्रमाणिकरण प्रक्रिया चलाउँदैछौं।
जहाँ तपाईले आफ्नो धेरै पैसा बर्बाद गर्न आवश्यक छैन। हामी वास्तवमा कसरी काम गर्छौं भन्ने हाम्रो प्रक्रियाको बारेमा जवाफ दिन पाउँदा म धेरै खुसी हुनेछु।
हामीले इमेलहरू प्रमाणीकरण गर्न चाहने ग्राहकहरूबाट सूची प्राप्त गर्दैछौं, त्यसपछि हामीले रिसेप्शनिस्ट वा कम्पनीको महाप्रबन्धकलाई फोन गर्यौं त्यसपछि हामी तिनीहरूको मान्य इमेलहरू सङ्कलन गर्छौं,
यसरी गरेर १५ दिन पछि हामी यसलाई हाम्रो इमेल प्रमाणिकरण प्रक्रियाबाट जाँच गर्छौं हामी Eblast गर्छौं।
यदि कसैलाई यस सम्बन्धमा लागतको बारेमा कुनै भ्रम वा प्रश्न छ।
हामीलाई मेल गर्न नहिचकिचाउनुहोस् हामी सकेसम्म चाँडो तपाईलाई फिर्ता गर्नेछौं
अक्टोबर 25, 2016 बिहान 8:26 बजे
लेख को लागी धन्यवाद! म proofy.io प्रयोग गर्दै आएको छु र यसमा एकदमै खुसी छु। मूल्य अनुसार यो अन्य भन्दा कम महँगो छ र जहाँसम्म गुणस्तर र गति।
अक्टोबर 25, 2016 बिहान 8:47 बजे
Proofy.io को लागी धेरै धेरै धन्यवाद
डिसे 2, 2016 मा 4: 37 AM
Proofy.io एक घोटाला कम्पनी हो। सेवाले काम गर्दैन। मैले 10000 चेकहरूको लागि भुक्तान गरेको छु, मेरो 4000 इमेलहरूको सूची अपलोड गरेको छु र यो पछिल्लो2दिनदेखि "प्रशोधन" भइरहेको छ।. साइटमा लाइभ मद्दत र मैले अनलाइन फेला पार्न सक्ने साइटको बारेमा सबै जानकारी, गुगल मार्फत सधैं एक व्यक्तिबाट हुन्छ। रोमन (जो सायद साइटको मालिक पनि हो) र उनको साथी अन्ना भनिन्छ। मैले कुनै अन्य विश्वसनीय समीक्षाहरू फेला पारेको छैन र उनीहरूलाई पैसा दिनु हुँदैन किनभने तिनीहरू अहिले पूर्ण रूपमा मौन छन्। तिनीहरूले "अहिले सर्भरमा काम गर्ने प्रोग्रामर" को बारेमा केही उल्लेख गरे तर त्यसबेलादेखि - कुनै सञ्चार र पैसा फिर्ता छैन। proof.io प्रयोग नगर्नुहोस् !!!
20 डिसेम्बर, 2016 बेलुका 10:00 बजे
सुझावहरूको लागि धन्यवाद! अद्भुत सुझावहरू।
जनवरी 9, 2017 मा 5: 58 एएम
हामी आधिकारिक रूपमा अनुमोदित कागजात दिन सक्ने कम्पनी खोज्दैछौं कि प्रमाणित इ-मेल ठेगानाहरू वास्तवमै वैध र जाँच गरिएका छन्।
यस्तो कुनै कम्पनी चिन्नुहुन्छ?
जनवरी 9, 2017 मा 11: 30 एएम
म पक्का छैन कि कसैले आधिकारिक प्रमाणीकरण प्रदान गर्न सक्छ किनकि मानिसहरूले इमेलहरूको प्रयोग बन्द गर्छन् र प्रत्येक दिन इमेल ठेगानाहरू परिवर्तन गर्छन्। सबै भन्दा राम्रो एक प्लेटफर्म हो जसले इमेल ठेगाना परिवर्तनहरू क्याप्चर गर्ने प्रयास गर्दछ र तपाईंको सूची त्यसको विरुद्धमा स्क्रब गर्न सकिन्छ।
जनवरी 11, 2017 11:07 बजे
"विडम्बना, मेरो विचारमा, यो हो कि म विश्वास गर्छु कि एक SPAMMER को लागी तपाईको इनबक्समा ईमेल प्राप्त गर्न औसत कम्पनीले वैध सन्देश पठाउने भन्दा सजिलो छ।"
तपाईं सायद यसमा सही हुनुहुन्छ, तर यो किनभने सामान्यतया व्यवसायहरूले इमेल मार्केटिङ सही रूपमा प्रयोग गर्दैनन्, वा तिनीहरूको सूचीहरू थप प्रयोगयोग्य बन्न र उनीहरूलाई उत्कृष्ट अभ्यासहरू सिक्नको लागि प्रायः पर्याप्त हुन्छन्। तिनीहरू (सबैले) अधिक बारम्बार इमेल गर्नुपर्छ।
तर उपकरणहरूको सूचीको बारेमा... अद्भुत!
जनवरी 11, 2017 11:09 बजे
हामी Neverbounce, Oscar को CEO सँगको उत्कृष्ट पोडकास्ट अन्तर्वार्ताको साथ यो पोस्टलाई पछ्याउन जाँदैछौं। सम्पर्कमा रहनुहोस्!
जनवरी 20, 2017 मा 3: 20 एएम
मलाई लाग्छ कि तपाईको एसीसी बनिसकेपछि तपाईको इमेल प्रमाणित गर्ने कुनै उपाय छैन। त्यसैले मेरो अनुमान छ कि तपाईले यो गर्नु पर्छ जब तपाईले पहिलो चरणमा तपाईको एसीसी सिर्जना गर्नुहुन्छ।
मार्स 28, 2017 मा 11: 55 एएम
गजबको लेख। के म जान्न सक्छु कि तपाईंले नेभरबाउन्स, ओस्करको सीईओसँग वेबिनार चलाउनुभएको छ?
अप्रिल 24, 2017 मा 4: 47 PM
म वास्तविक समयमा इमेल ठेगानाहरू प्रमाणीकरण गर्ने बारे जानकारी खोज्दै छु किनकि नयाँ ग्राहक मेरो कम्पनीमा आउँछन्। के त्यो सफ्टवेयर/प्रविधि मेरो हालको सफ्टवेयरमा थप्नको लागि उपलब्ध छ? वा हामीले हाम्रा सबै हालको सफ्टवेयर परिवर्तन गर्न आवश्यक छ? हामीसँग हाम्रो टोलीले ग्राहकको इमेल ठेगानाहरू गलत टाइप गर्ने वा ग्राहकले पनि त्यसो गर्ने समस्या छ। म यसलाई सूची सफा गरिनुको सट्टा खरीदको बिन्दुमा रोक्न चाहन्छु त्यसपछि हामीले हाम्रो ग्राहकमा पुग्नुको सट्टा खराब इमेल ठेगाना होल्ड गरेर।
अगस्ट 29, 2017 बेलुका 12:24 बजे
यदि तपाइँ वास्तविक-समय इमेल प्रमाणिकरण हेर्दै हुनुहुन्छ भने, emailchecker.com मा केटाहरूसँग कुरा गर्नुहोस्, मसँग उनीहरूको वास्तविक-समय समाधान प्रयोग गर्ने पहिलो हात अनुभव छ र यो उत्कृष्ट र सही छ!
जुन 27, 2017 मा 10: 36 PM
नमस्ते डगलस, त्यहाँ एक राम्रो संकलन। मलाई लाग्छ कि तपाईंले ठूलो खेलाडीलाई गुमाउनुभयो - http://www.emailverifierapp.com कृपया यसलाई जाँच गर्नुहोस्। धन्यवाद
अगस्ट 29, 2017 बेलुका 12:22 बजे
उत्कृष्ट लेख डग धेरै जानकारीमूलक र केही उत्कृष्ट टिप्पणीहरू, हामी एक प्रमुख जेन कम्पनी चलाउँछौं र ग्राहकहरूको लागि वेबमा असंख्य निचो पृष्ठहरू छन् र दिनमा केही हजार इमेलहरू सङ्कलन गर्दछौं! हामीले केही कम्पनीहरू प्रयोग गरेका छौं तर हामीले परीक्षण गरेका हाम्रो पहिलो कम्पनीमा फर्क्यौं (इमेल परीक्षक भनिन्छ) तिनीहरूको सफ्टवेयर सबैभन्दा सही र भरपर्दो भएको फेला पर्यो। हामी हाम्रो निचोड पृष्ठहरूमा तिनीहरूको एपीआई प्रयोग गर्छौं र यो हाम्रो लागि उत्कृष्ट उपकरण र हाम्रा ग्राहकहरूसँग धेरै लोकप्रिय छ, तिनीहरूले बल्क प्रमाणिकरण पनि प्रस्ताव गर्छन् जुन हामी समय-समयमा प्रयोग गरिएको फारम प्रयोग गर्छौं तर हामी तिनीहरूको API दैनिक उत्कृष्ट नतिजाहरूको साथ प्रयोग गर्छौं। जे भए पनि मेरो अनुभव साझा गर्न चाहन्छु किनकि मलाई थाहा छ त्यहाँ धेरै प्रतिस्पर्धा छ, इमेलचेकरमा केटाहरूलाई उनीहरूको वेबसाइट हो भनेर चिच्याउनुहोस्। http://www.emailchecker.com र तिनीहरूलाई जोन मोर्गनले तपाईंलाई पठाएको भन 🙂
खुशी छ तपाईले प्रमाणीकरण र प्रमाणिकरण बीचको भिन्नता उल्लेख गर्नुभयो। के हामी ईमेलचेकर डट कमलाई सूचीमा थप्न सक्छौं?
अक्टोबर 27, 2017 बिहान 9:39 बजे
अक्टूबर २०, २०१ at २:28० अपराह्न
यहाँ अर्को उपयोगी उपकरण हो जुन म सुझाव दिन चाहन्छु: https://debounce.io
के तपाइँ यसलाई तपाइँको सूचीमा थप्न सक्नुहुन्छ?
डिसे 10, 2018 मा 7: 59 AM
हामीले DeBounce थपेका छौं, धन्यवाद!
इमेल प्रमाणिकरणको लागि थप एउटा एप सुझाव दिन चाहनुहुन्छ - https://mailcheck.co
तिनीहरू मेलमा जडान भएका सामाजिक प्रोफाइलहरूमा बढी रिले गर्छन्, प्रत्यक्ष smtp जाँचहरूमा कम। यसले थप जानकारी प्राप्त गर्न र इमेल मालिक gravatar, gmail, आदि मा सक्रिय छ भनेर निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ।
धन्यवाद, मैले थपेको छु!
अगस्ट 6, 2019 मा 10: 18 AM
के म यो सूचीमा अर्को उत्कृष्ट उपकरण थप्न सक्छु?
ट्रुमेल (https://truemail.io/) एक महान इमेल प्रमाणिकरण उपकरण हो।
यो धेरै सटीक र प्रयोगमा सजिलो छ। यसले तपाईंको सूचीलाई अवैध र खतरनाक इमेल ठेगानाहरूबाट तुरुन्तै सफा गर्नेछ।
वैसे, यसमा प्रत्येक महिना 1,000 नि:शुल्क ईमेल प्रमाणिकरणहरू छन्।
अगस्ट 6, 2019 बेलुका 1:07 बजे
धन्यवाद Alona! मैले तिनीहरूलाई अर्को सूचीमा थपेको छु किनकि तिनीहरूले आफ्नो मूल देश लुकाइरहेका छन् र तिनीहरूको whois डेटा निजीमा सेट गरिएको छ।
मई 24, 2020 मा 5: 50 PM
तपाईले यो नि:शुल्क प्रमाणीकरण सेवाको साथ इमेलहरू पनि प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ: https://www.emailverified.org
नमस्ते डग, तपाईंले नयाँ सेवा प्रदायकहरूसँग विगत केही वर्षहरूमा लेख अद्यावधिक राख्नु भएको तरिका शानदार छ, म प्रयासको प्रशंसा गर्दछु। म एन्टिडियोलाई सूचीमा थप्न सुझाव दिन चाहन्छु, यो त्यहाँको सबैभन्दा किफायती सेवाहरू मध्ये एक हो। एक महिनामा 5000 भन्दा बढी प्रमाणीकरण जाँचहरू प्रदान गर्ने नि:शुल्क तह एउटा सानो व्यवसायको लागि पर्याप्त भन्दा बढी हो, त्यसैले यदि तपाईंले सेवा (www.antideo.com) मा एक नजर लिन सक्नुहुन्छ र तपाईंले देख्नुभयो भने हामीलाई तपाईंको सूचीमा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ भने धेरै प्रशंसा हुनेछ। फिट
धन्यवाद, मैले यसलाई सूचीमा थपेको छु। एक साइड नोट, यो तपाईंको अभिभावक कम्पनीको साइट डाउन छ जस्तो देखिन्छ।